Nihabetsaka ny kolikoly eto Madagasikara tamin'ny taona 2018 ka anisany izany ny ao amin'ny Fitsarana hoy ny Afrobaromètre 2018 -LE JITE DU 19 FEVRIER 2019 - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil Corruption Madagascar Nihabetsaka ny kolikoly eto Madagasikara tamin’ny taona 2018 ka anisany izany ny...
Namoaka ny valin’ny fanadihadihana izay nataon’izy ireo ho an’ny taona 2018 novalin’ny Coeff ressources izay solontenan’ny afrobaromètre eto Madagasikara.
Eo amin’ny sehatry ny kolikoly dia nambaran’ireo olona nohadihadihana fa ny polisy sy ny zandary ary ny fitsarana no lohalaharana amin’ny sehatra asa tena misy izany. Nanontaniana ihany koa ny fahitan’ny olona ny demokrasia eto amintsika sy ny sehatra hafa toy ny miralenta. Mitatitra amintsika ny vaovao momba izay i Andry Lalaina Andriamasy sy Stephan Rakotomalala.
Tamin’ireo olona niisa 1200 nanerana ny Nosy, nanontaniana mahakasika ny fahitan’izy ireo ny sehatra asa hisian’ny kolikoly eto amintsika; dia nitana ny lohalaharana tamin’izany ireo mpitandron’ny filaminana, nahitana ny polisy sy ny zandary, ary koa eny anivon’ny fitsarana.
Nanontaniana teo dia hoe nanolotra kolikoly ve ianao mba hafahanao miala amina olana mety hiseho, izay anankiray. Na hoe nanolotra kolikoly ve ianao mba azahoana services izany na tamin’ireo zandary ireo na ireo mpitandron’ny filaminana ireo. Ireo izany aloha ny sehatra anankiroa nisehoan’izay kolikoly izay. Eo ihany koa izany ny eo amin’ny resaka fitsarana na ireo olona manodidina izany lafiny fitsarana izany. Ireo izany anisany ihany koa voatondro molotra amin’izay lafiny izay. Izany tsy midika fa any amin’ny sehatra hafa tsy misy, satria voateny tao avokoa na ny amin’ny parlementaires ohatra na ny amin’ny sehatra ohatra hoe any amin’ny fitondram-panjakana rehetra any na ny présidence na ny governemanta izany.
Ankoatrany kolikoly dia nanaovan’ny Coeff ressources izay solontenan’ny afrobaromètre eto amintsika fanadihadihana ihany koa ny fahitan’ireo olona ireo izay maha-solontena ny vahoaka Malagasy ny fitrangan’ny deokrasia eto Madagasikara.
Article précédentImplication des institutionnesls malgaches dans les affaires de corruption : 44 % pour les forces de l’ordre, 39 % pour les magistrats – D’après les chiffres de l’Afro baromètre 2019 round 7
Article suivantCorruption à Madagascar : gendarme – police – justice, le tiercé gagnant – Expressmada du 19 février 2019